5-ta barnaamij ee toosh ugu fiican ee loogu talagalay Android | Androidsis
Haaruun Rivas | 12/07/2021 08:00 | Codsiyada Android, Aaladaha Android
Waxaan ku laabaneynaa qoraal kale oo uruurin ah, oo aan kugu soo bandhigeyno taxane ah 5-ta barnaamij ee toosh ugu fiican ee loogu talagalay Android. Liiskan aan hoos ku soo bandhigeyno, waxaad ka heli doontaa dhowr ka mid ah kuwa ugu isticmaalka badan oo laga soo dejiyey Google Play Store.
Waxa kale ayaa ah in dhammaan barnaamijyada aan halkan kuugu soo ururinnay ay kuu leeyihiin qiimeynta ugu fiican dukaanka oo dhan, sidaas darteed iyaguna waa kuwa leh shaqooyinka ugu badan.
Markan waxaan soo bandhigeynaa isku-darka 6-da codsi toosh ee ugu wanaagsan mobilada Android. Waxaa habboon in mar kale la muujiyo, sida aan had iyo jeer yeelno, taas Dhammaan barnaamijyada aad ka heli doontid boostadan uruurinta waa bilaash. Sidaa darteed, uma baahnid inaad foorjirto wax lacag ah si aad u hesho mid ama dhammaantood.
Dhinaca kale, in kasta oo barnaamijyada tooshku aysan ku lahayn sumcad aad u wanaagsan Android, maaddaama qaar badani loo adeegsaday hab lagu qaado fayrasyada iyo / ama barnaamijyo khatar ah oo fulin ah oo saameeya hawlgalka taleefannada gacanta, kuwa hadda aan ku hadalno ma soo bandhigi karaan nooc kasta oo dhibaato ah, sidaa darteed gebi ahaanba waa ammaan in la rakibo. Hadda haa, u tag!
1 Toosh (bilaash oo aan lahayn xayeysiis pop-up ah)
2 Tooshka Awoodda Sare
4 Toosh toosh ah
6 Sida loo kiciyo ama loo kiciyo tooshashka ama tooshka taleefannada Android iyadoon lahayn barnaamijyo dhinac saddexaad ah
Toosh (bilaash oo aan lahayn xayeysiis pop-up ah)
Mid ka mid ah waxyaabaha inta badan laga helo barnaamijyada toosh ee loogu talagalay Android waa xayeysiis iyo xayeysiisyo dhib leh. Tani waa wax, nasiib wanaag, kuma helno codsigan, maadaama ay ka xor tahay nooc kasta oo calaamado xayeysiis ah oo ku saabsan is-dhexgalkeeda, oo sidoo kale nadiif ah, fudud oo shaqeyneysa.
Barnaamijkani wuxuu taageeraa dhaqdhaqaaqyada, tooshkiisuna wuu daaran karaa ama damin karaa isagoo kolba dhinac u ruxaya si fudud oo dhaqso ah. Dhanka kale, waa la isticmaali karaa xitaa marka mobiilku xiran yahay. Iska iloobi inaad daarto shaashadda oo aad furto qalabka kadibna aad raadiso barnaamijka, geli oo shido tooshka; Nidaamkan oo dhan wuxuu qaadan karaa dhowr ilbiriqsi oo xoogaa caajis ah.
Dhinaca kale, wuxuu leeyahay aalad in aad dhigikarto meelkasta shaashadda weyn si aad udhaqaajiso tooshka markasta oo aad rabto, adigoon sii dheerayn. Intaa waxaa dheer, waxaan ka hadleynaa codsi aad u fudud, maadaama culeyskiisu aanu ka badneyn 3 MB. Ugu dambeyntiina, waa mid ka mid ah kuwa ugu soo dejinta badan uguna badan ee la isticmaalay, in ka badan 5 milyan oo soo degsasho ah iyo qiimeyn 4.7 xiddig ah oo aad loo ixtiraamo taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah kuwa ugu fiican taleefannada gacanta ee Android; maahan wax aan ku helnay meesha ugu horeysa ee qoraalkan soo uruurinta ah.
Tooshka Awoodda Sare
Si laga bilaabo, abkan ma laha xayeysiis faragelin ah, aad uga yar kuwa u muuqda kuwo si xanaaq leh ugu muuqda baarka ogeysiiska badanaa. Ka sokow, ma weydiisanayo nooc kasta oo rukhsad aan loo baahnayn ah; ilaa barta, taas oo ah in la bixiyo barnaamij toosh fudud ah, laakiin leh shaqooyin dhowr ah oo dheeri ah.
Waana Tooshka Awoodda Sare leh waa codsi leh dhex-dhexaad wacan, oo badhtanka ku leh badhan, haddii aad riixdo, tooshku waa la hawlgeliyaa ama waa la xidhay Ka sokow tan, waxay la imaaneysaa jiheeye la dhisay, oo aad adigu naftaada ku hagi kartid marwalba, adoo ku saleynaya qodobbada aasaasiga ah, in ka badan wax kasta haddii aanu jirin xitaa iftiinka ugu yar, oo ku habboon kiisaska korontada ka go'an ama marka aad ku aragto inaad ku lumisay keyn ama meel kale oo ay waa maya ma jirto meel tixraac ah oo kugu haga.
Muuqaal kale oo ka mid ah barnaamijkan ayaa ah inuu leeyahay calaamadda 'SOS' iyo qaab istiraatiijiyad leh 10 isdabajoog oo kala duwan
Kani waa barnaamij kale oo toosh ah oo toosh ah oo in kasta oo aanu u taagnayn soo bandhigida hawlo badan, haddana wuxuu u sameeyaa inuu ka mid noqdo kuwa ugu shaqada badan. Maxaa intaa ka badan, hal dhibic oo ay ku qanacsan tahay ayaa ah inaysan soo bandhigin xayeysiis ama xayeysiis xanaaq badan, sidaa darteed waxaad haysataa waxaad raadineyso: barnaamij toosh fudud ah oo lagu xisaabtamo marka mugdigu meel walba xukumo.
Ahaanshaha codsi aad u fudud oo si wanaagsan loo gaadhay, waa dhakhso bilow. Iskuxirkiisu waa midka ugu fudud uguna fudud waxaad kaheli doontaa badhtanka xarunta oo dhan, kaas oo aad tooshka ugu shidi karto ama ugu demin karto taabasho fudud. Intaas waxaa sii dheer, waxay kaloo leedahay qaab dhismeed dhisme ah iyo naqshado badhan awood kala duwan oo aad ku qaabeyn karto midabka aad jeceshahay. Arrinta kale ayaa ah in toosh-ka barnaamijkan sidoo kale uu shaqeyn karo marka shaashadda dansan tahay ama la xiray.
Toosh toosh ah
Tooshka Tooshku ma noqon karo mid ka mid ah barnaamijyadooda toosh ee ugu fiican qoraalkan uruurinta ee loogu talagalay Android, laakiin kuwa ugu fiican, iyo sababaha way fududahay: waa mid ka mid ah kuwa ugu badan ee hawlaha iyo astaamaha ku jira Play Store.
Waana in barnaamijkani soo bandhigayo muuqaal aad u xiiso badan, oo ah fiidiyoowga iyo fiidiyowga muuqaalka, kaas oo kuu oggolaanaya inaad dhaqaajiso toosh-ka mobilkaaga, isla waqtigaas oo fiidiyowgu uu suurtogal ka dhigayo in wax walba lagu arko shaashadda diiradda saareysa kamaradda, waa ikhtiyaar aad u faa'iido badan oo lagu baadho walxaha mugdiga adigoon u dhowaan. Shaqadan, oo waliba u shaqaysa sidii muraayad weyneeynaysa, waxaa wax looga akhrisan jiray gudcurka shaashadda.
Dabcan, barnaamijkan sidan oo kale ah, saameynta flash-ka ee xakamaynta xawaaraha ma maqnaan karo. Intaas waxaa sii dheer, waxay kaloo leedahay qaab daar iyo demin adigoo sacabinaya, wax aad waxtar u leh haddii aadan taleefanka gacanta ku hayn. Arrinta kale ayaa ah in tooshku sidoo kale la hawl gelin karo ama la demin karo haddii taleefanka casriga ah la beddelo, laakiin haddii tani aysan ahayn sidaad jeceshahay, waxaad dooran kartaa fududeynta iyo daarista badhanka ka muuqda muuqaalka.
Dhinaca kale, Tooshku wuxuu kaloo leeyahay nal loogu talagalay keydinta batteriga, xulashooyinka qaabeynta saacadaha iftiinka iyo hagaajinta dhalaalka iftiinka LED si loogu hagaajiyo iyadoo la adeegsanayo boodhka isbarbar dhaca. Intaas waxaa dheer, Waxay leedahay tilmaame batari. Dhammaan xulashooyinkaan iyo dejimahaas waxaa lagu hagaajin karaa iyada oo loo marayo guddiga guud ee barnaamijka, kaas oo leh is-dhexgal aad u fudud oo si sahlan loo arki karo, oo leh badhanno dhowr ah.
Codsigan toosh ee loogu talagalay Android sidoo kale waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu fudud uguna yar ee dalbanaya xagga RAM iyo processor. Culeyskiisu wuxuu ka yara yaraa 8 MB Iyo, haddii kale, waxay ku leedahay sumcad wanaagsan Dukaanka Play-ka ee 4.3 xiddigood iyo in ka badan 10 milyan oo laga soo dejiyey dukaanka taas oo ku saleysan qiyaastii 200 kun oo faallooyin togan.
Toosh 🔦🌟 Toosh
Waxaan la soo laabaneynaa mid kale oo ka mid ah barnaamijyada tooshka lagu duubay ee noociisa ah. In ka badan 10 milyan oo soo degsasho ah iyo qiimeyn aan la doodi karin oo 4.7 xiddigood ah, tan lama seegi karo, iyada oo la fiirinaayo macnaha guud, ee qoraalkan soo uruurinta ah.
In kasta oo magaceedu fudud yahay, wuxuu soo bandhigayaa hawlo dhowr ah oo xiiso leh. Xaaladdan oo kale, ma haysanno oo keliya barnaamij fudud oo aan ku kicin karno ama u joojin karno tooshka ama iftiinka dambe ee LED-ka ee aan jeclaanno, laakiin sidoo kale waxay noo oggolaaneysaa inaan u isticmaalno shaashadda sidii toosh, oo leh iftiinkeeda ugu sarreeya, haa Tani waa wax si gaar ah ugu wanaagsan moobiilladaas duugga ah ee aan lahayn Flash Flash, oo yar, laakiin ay jiraan.
Waxyaabaha aan la ogaan karin maqnaanshahooda barnaamijkan waa aaladda, kaas oo aad dhigikarto meelkasta shaashadaada ugu weyn si aad ugahesho tooshka ama aad uhesho markasta oo aad rabto. Waad hagaajin kartaa qaybaha kala duwan ee qaabeynta; tusaale ahaan, shid codka ama dansiga markii tooshku daaran yahay ama la xidhayo.
Dhinaca kale, marka laga reebo soo bandhigida qalab loogu talagalay shaashadda ugu weyn ee Android-kaaga, waxay leedahay mid ka muuqda baarka ogeysiiska, kaas oo aad ku heli kartid goobaha barnaamijka, dhaqaajiso ama demiso tooshka ama u furto dalabka si dhakhso leh.
Developer: Barnaamijyo qurux badan
Sida loo kiciyo ama loo kiciyo tooshashka ama tooshka taleefannada Android iyadoon lahayn barnaamijyo dhinac saddexaad ah
Dhamaan taleefannada Android - uguyaraan kuwa leh iftiinka LED-ka - waxay leeyihiin ikhtiyaar ay ku kiciyaan feeraha gadaal gadaal, marka, xaqiiqda, badanaa badiyaa lagama maarmaan ma aha in loo yeesho barnaamij. Tan waxaa badanaa laga helaa barta ogeysiiska, laakiin waxaa laga heli karaa meelo kale sidoo kale; tani waa wax horeyba ugu tiirsanaa khaaska ah lakabka qalabaynta.
Kaliya hoos u dhig boodhka ogeysiiska hoostiisa isla markaana ka fiiri qeybta koontaroolka tooshka ama badhanka flash-ka. Qaababka qaarkood ee qaabeynta ayaa sidoo kale loogu hawlgelin karaa qaab ka duwan, sida laba qasabadood oo mid kasta oo ka mid ah badhannadeeda jireed, sida xaaladda Xiaomi iyo Redmi oo leh MIUI. In kasta oo, kan dambe, waa inaad marin u heshaa taleefannada gacanta oo aad qaabeysaa ikhtiyaarkan, oo sidoo kale lagu dabaqi karo kiisaska kale, haddii ay ku saabsan tahay taleefannada gacanta ee noocyo kala duwan, dabcan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Top 5 Toosh Apps ee loogu talagalay Android
8-da codsi ee ugufiican ee lagu barto dhaansiga hiphop